सहकर्मीले पादेर हैरान बनाएको भन्दै मुद्दा दायर, २० करोड क्षतिपूर्ति माग — sancharkendra.com
दुनियाँमा कस्ता कस्ता विषयमा मुद्दा दायर गरिन्छ होला ? के कसैले पादको विषयमा मुद्दा हालेको सुन्नुभएको थियो ? सायद दुनियाँमा यस्ता घटना यसअघि कहिल्यै भएको थिएन, जुन हालै अष्ट्रेलियामा भएको छ ।
अष्ट्रेलियाको मेलबर्नमा एकजना व्यक्तिले झण्डै २० करोड रुपैयाँ बराबरको रकम क्षतिपूर्ति माग गर्दै आफ्नै सहकर्मी विरुद्ध मुद्दा हालेका छन् । यसरी मुद्दा हाल्नुको कारण रहेको छ, ती सहकर्मीको पाद ।
पेशाले निर्माण इन्जिनियर रहेका ती व्यक्तिको आरोप छ कि उनका ती आरोपित सहकर्मी हरेक दिन कार्यालय समयमा उनको कोठामा पटक पटक आएर पाद्ने गर्दछन् ।
यसरी बारम्बार पाद्नाले दुर्गन्ध फैलिएको, काम गर्नै अप्ठेरो भएको र आफू प्रताडित भएकोले मुद्दा दायर गर्नुपरेको उनको जिकिर छ । पादका कारण अफिसमा काम गर्ने वातावरण नै नरहेको उनको भनाई छ ।
डेभिड नामका ती ५६ वर्षीय इन्जिनियरले पदुवा सहकर्मीविरुद्ध १८ लाख डलर क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन् । दिनमा ५-६ पटक ती सहकर्मी आफ्नो कोठामा आउने र पादेर जाने गरेको भन्दै उनले त्यसपछि हुने दुर्गन्धलाई कम गर्न आफूले कोठामा सेन्ट छर्किने गरेको बताएका छन् । यो मुद्दाको बारेमा अदालतले आउँदो शुक्रबार अन्तिम फैसला गर्नेछ ।
यसैबिच टेलिभिजन अभिनेत्री रुही सिंहले सोमबार राति बान्द्राको एक रेस्टुरेन्टको बाहिर हंगामा गरेकी छिन् । टेलिभिजन अभिनेत्री रुही सिंहले सोमबार राति बान्द्राको एक रेस्टुरेन्टको बाहिर हंगामा गरेकी हुन् ।
उनी विरुद्ध मुम्बइ प्रहरीले एफआइआर दर्ता गरेको छ । यो घटनाको कयौं भिडियो सामाजिक सञ्जालहरुमा भाइरल भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।
स्पोटब्वाईको एक रिपोर्ट अनुसार रुही आफ्ना साथीहरु राजेश र राहुलसँग राति अबेरसम्म बन्द्राको एक रेस्टुरेन्टमा थिइन् । उनीहरु ढिला पुगेका थिए । त्यतिबेलासम्म रेस्टुरेन्ट बन्द भइसकेको थियो। तर रुहीले त्यहाँ भएका स्टाफसँग रेस्टुरेन्ट खोल्न भनिन् ।
उनी रेस्टुरेन्टको वासरुम प्रयोग गर्न भित्र प्रवेश गर्न खोजेकी थिइन् तर बन्द भइसकेको भन्दै रेस्टुरेन्टका कर्मचारीले उनलाई भित्र पस्न दिएनन् त्यसपछि उनले रेस्टुरेन्टका कर्मचारीमाथि हातहालिन् । अबेर राति भएको यो हंगामा पछि स्टाफले प्रहरीलाई फोन गरेर बोलाए । प्रहरी पुग्दा उनी रेस्टुरेन्टका कर्मचारीसँग झगडा गरिरहेकी थिइन् ।
जब प्रहरीले उनलाई सम्झाउन खोज्यो तब उनले प्रहरीमाथि नै हात हालिन् । यो सबै घटनाको भिडियो खिचिराखेका प्रहरी लक्ष्मीकान्तको मोबाइल खोसेर थप्पण मारिन् । उनी नशामा रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
गाडीको स्टेरिङ घुमाउँदै थमन गाउँछन्, खै त बुझेको ?
४१ वर्षीय थमन गुरुङको मुख्य पेसा ड्राइभिङ हो । गाडीका स्टेरिङसँग खेल्न थालेको बिसौं वर्ष भइसकेको छ । पर्वतबाट पोखरा सपना खोज्दै झरेका उनी साउदीको घाम पनि खाए । पोखरा काठमाडौं रुटमा चल्ने माइक्रो र बसबाट यात्रुलाई सकुशल गन्तव्यमा पनि पुर्‍याए ।
पछिल्लो समय उनी गोर्खा वेल्फेयरसँग आबद्ध छन् । गोर्खा वेल्फेयर सहकारी संस्थाको गाडी चलाउन थालेको ४ वर्ष भइसकेको छ । यही ४ वर्षको बीचमा ४ वटा गीत पनि बजारमा ल्याइसकेका छन् । गीतसँग नजिकको लगाव भएकै कारण ड्राइभिङ र संगीतलाई डोर्‍याइरहेका छन् । आधुनिक गीतमा रुचि राख्ने गुरुङको आइतबारमात्रै ‘खै त बुझेको ?’ नयाँ गीत बजारमा आएको छ ।
देशविदेशमा वर्षौंदेखि गाडीको स्टेरिङ घुमाउँदै गीत गुनगुनाउने थमनले अहिले प्रविधिको युगलाई समाउँदै युट्युबमार्फत गीत सार्वजनिक गरेका छन् ।
आधुनिक गीतमा बढी रमाउने थमनले गैरे सुरेश, दीपक शर्मादेखि हरि लम्सालको संगीतमा समेत गीत बजारमा ल्याएका छन् ।
‘मेरो रुचि एउटामा मात्रै होइन दुई वटा कुरामा एकैचोटी भइदियो– गीत र ड्राइभिङ । दुवैलाई अहिले सँगसँगै लगिरहेको छु ।
पछि गाडीमा लाग्दालाग्दै संगीतमा आउन अलि ढिलो भएकोचाहिँ पक्का हो,’ उनी सुनाउँछन् । डायरीमा गीत लेख्दै थन्क्याउँदै गरेका थमनका शब्द बल्ल स्रोता, दर्शकको कान, आँखासम्म पुग्न थालेका छन् ।
चलचित्रका गीतहरुबाट लोकप्रियताको शिखर चुमिरहेका गीतकार तथा संगीतकार दीपक शर्माको शब्द तथा संगीतमा थमनको नयाँ गीत ‘खैत बुझेको’ अहिले सार्वजनिक भएको हो ।
यो गीतमा निर्मला घिसिङले थमनलाई साथ दिएकी छन् । भिडियोको छायांकन तथा निर्देशन पोखराका सरोज अधिकारीले गरेका छन् । अभिनयको सिँढी उक्लँदै गरेका अनील अधिकारी र मेलिसा खतिवडाले भिडियोलाई अझ रोचक बनाउने गरी अभिनय गरेका छन् । भीम विश्वकर्माको सम्पादन र सञ्जीवरत्न शाक्यको संयोजनका सार्वजनिक भएको भिडियोले छोटो समयमै दर्शकको मन जितिरहेको छ ।